सांसद पौडेलले उक्त प्रश्न सरकारले ल्याएको फौजदारी अभियोग लाग्दा समेत सांसद निलम्बन नहुने नया“ व्यवस्था सहितको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रस्तावमाथि २५ जेष्ठमा संसद वैठकमा चलेको छलफलमा बोल्दै राख्नु भएको हो । बोल्ने क्रममा सांसद पौडेलले ज्यान मार्ने बलात्कार गर्ने जस्ता अभियोग लागेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएकोमा आफ्नो पार्टीको घोर आपत्ति रहेको बताउनु भयो । “फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो तर नियमावलीमा यो नगरेर त्यस्ता सांसदलाई पनि उन्मुक्ति दिने कार्य गरिएको छ । यो प्रावधान प्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको घोर आपत्ती छ” सांसद पौडेलले भन्नु भयो– “२०६४ र २०७० सालमा पनि प्रतिनिधि सभा नियमावली बनेका थिए । त्यति बेला पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने आवाज उठेका थिए तर त्यतिबेला त्यस्तो प्रावधान राखिएन । अहिले राख्नु पर्ने कारण के हो ? निलम्बन भन्ने शब्द नराख्ने भएपछि अब के माननीय हत्यारा, माननीय भनेर सम्बोधन गर्ने त ?”
सांसद पौडेलले जस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बनको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा राख्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको तीव्र असहमतिका बाबजुद पनि प्रतिनिधि सभाको वैठकले सरकारद्वारा प्रस्तावित उक्त नियमावली अत्यधिक बहुमतका साथ पारित गरेको थियो ।
कस्तो अचम्म घ् संविभानले महाभियोग लाग्ने बित्तिके राष्ट्रपति निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर अब सांसदहरु भने फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन नपर्ने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि अब फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नु प¥यो भने पहिले सलोट ठोकेर अनि मात्र हत्कडी लगाउनु पर्ने छ । ‘आफ््नै हात जगन्नाथ’ भने झँै को चरित्र सांसदहरुले नियमावली बनाउँदा देखाएका छन् । कुनै पनि फौजदारी काण्ड घटाइसकेपछि उक्त व्यक्ति जतिसुकै उच्च ओहदाको पदमा भए पनि उसको पद स्वतः निलम्बनमा पर्नु पर्छ । तर प्रतिनिधि सभाले निलम्बनमा नहुने नियमावली बनाएर प्रतिनिधि सभाको गरिमालाई नै होच्याउने काम गरेको छ । संसद र सांसदप्रतिको जनविश्वासलाई घटाउने काम गरेको छ । हो, नियमावलीमा त्यस्तो प्रावधान प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशवादी दलहरुको तीव्र दबाबपछि नै राखिएको हो । तर यसो भनेर सत्तापक्ष नेकपा यो दोषबाट उम्कन पाउने छैन । संसद र सांसदकै गरिमा होच्याउने खालको त्यस्तो प्रावधान नियमावलीमा राख्न सत्ता पक्ष नेकपा कसरी सहमत भयो ? इतिहासले यो प्रश्न उनीहरुलाई बारम्बार सोधिरहने छ ।